Zomaleko Double umphunga Water Bath babethi Sterilizer - China Qingdao Machinery uqinise
Le zomaleko Double umphunga Water Bath babethi Sterilizer lisetyenziswa abilayo iimveliso zokutya. Kukho uhlobo amanzi bath, uhlobo yokutshiza amanzi, kunye nohlobo umphunga amanzi ukhetho njengako uhlobo package lokutya. Ngokwesiqhelo umatshini isebenzisa kabini ri itanki yamanzi ashushu ukuze abilayo. It preheat amanzi kwitanki ashushu kwiqondo lobushushu igu-, ukunqumlela ixesha amagciwane. I-processing ukutya babethi esisodwa ubushushu ibekwe phezulu kakhulu ekuqaleni, ukukhusela umgangatho iimveliso.
Emva igu-, amanzi dewi ashushu ukuba itanki phezulu, i medium ukusebenza nga ri ukusetyenziswa, ukonga umphunga, amandla, kunye nexesha igu-. Ngoko ke ugcine lokuSetyenziswa kwaMandla oLuntu kunye nezinto resources.The maleko kabini bath amanzi umphunga babethi sterilizer temperature is even, water flow is even, there’s no dead space in the tank.The water spraying autoclave machine adopts most advance computer control system in the world.The full progress is fully computer controlled by PLC, one time finish, no need man operation.The PLC can store more than 100 pcs sterilizing programme. The sterilizing is standardization.
Wabenza lobushushu uvalo wevalufa, oluzenzekelayo ukunyenyisa lobushushu ngaphakathi etankini.
Sebenzisa ukusebenza eliphezulu ubushushu umzimba, nje imizuzu embalwa bangangena lobushushu nzala kulo.
Zonke ivelufa olusondeleyo evulekileyo kwaye ilawulwa yi computer.
Eliphindiweyo layers umphunga bath amanzi babethi sterilizer isebenzisa big touch screen, ukubonisa enamandla ukuhamba igu-.
umatshini nganye ukutshatisa inkqubo yolawulo gxila valume.
inkqubo yolawulo lobushushu Ukulinganisa, ungabeka amaninzi isigaba ukufudumeza.
Eliphindiweyo layers umphunga bath amanzi babethi sterilizer usasazeko thermal kunto, ulawulo umgangatho kulula.
Kabini layers bath amanzi babethi sterilizer elungileyo iimveliso impahla ethambileyo, ingakumbi ngenxa package enkulu, ubushushu kusichukumisa fast, isiphumo nzala xa okulungileyo.
Ukutya steel amanzi processing wokutshiza stainless umatshini nzala sinokuprinta kunye nexesha ivenkile, ubushushu, uxinzelelo curve imephu.
isitya Metal: Tin mzekelo, aluminiyam angakwazi, neglasi
package Soft: ibhegi ngefoyile ye-aluminiyam, eliphezulu lobushushu babethi yakutya, ibhegi lwepolitiki, ibhegi ngaphaya
Seplastiki: ibhotile PP, ibhotile HDPE
ekoko umatshini umgubo nzala
intlanzi umatshini processing ukutya
ukutya umatshini umgubo nzala
izixhobo nzala ukutya
Tye Pressure High Steam Sterilizer
zoshishino ukutya umatshini nzala
Jam umatshini nzala
mini umatshini babethi ukutya
Pet Ukutya Sterilization Machine
Esisodwa eziphathekayo Pressure Steam Sterilizer
iimveliso zokutya babethi
umatshini sausage nzala
esisodwa amancinci sterilizer ukutya
umatshini encinane uht nzala
Umphunga Fish ilebhu Food Sterilization babethi
ixabiso sterilizer umphunga
talcum umgubo umatshini nzala
Ingcinezelo nkqo Steam Sterilizer
Stainless Uluhlu Water yokutshiza ...